GOVERNORAN’NY FARITRA ANALAMANGA : “Asiana antoka ny asa rehetra hatao”
Avy hatrany dia miainga ny fampandrosoana izay takina amin’ireo Governoran’ny Faritra. Ho an’ny Faritra Analamanga manokana dia fomba fiasa mazava no apetraky ny Governora Hery Rasoamaromaka. Tsy misy ny asa mandeha amin’izao fa tsy maintsy asiana ny antoka, raha ny nambarany. 10 octobre 2019
Hentitra ny fomba fiasa takina amin’ireo Governora isam-paritra. Fampandrosoana mivaingana sy misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainam-bahoaka no takina amin’izy ireo. Herintaona no fe-potoana ifanarahana amin’ireo Governora tsirairay. Izay tsy nahavita ny asa nampiandraiketina azy araka ny tokony ho izy dia soloina avy hatrany, hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Nitondra ny fanehoan-keviny voalohany momba ny fandraisany ny fitantanany ny Faritra Analamanga ny Governora Hery Rasoamaromaka. Ombany manana io fepetra napetraky ny Filoham-pirenena io satria izay tsy “mahavita azy”, hoy izy , dia tokony miala ary vonona tanteraka ny amin’izany izy raha sanatria ka tsy hahatanteraka ireo asa nomena hiantsorohany.
“Fifaninanana masina ny anay Governora ary fifanarahana no iarahanay amin’ny Filoha. Rehefa tsy vita izay zavatra nifanarahana taminay dia miala izahay”, hoy ny Governoran’ny Faritra Analamanga, Hery Rasoamaromaka. Efa misoritsoritra avokoa ny asam-pampandrosoana napetrany ho an’ny Faritra Analamanga. Anisan’izany fananganana fotodrafitrasa maro toy ny sekoly sy lalana. Nambarany fa hentitra ny fanatanterahana ny asa rehetra fa tsy misy mandeha ho azy izany intsony. Tsy maintsy hisy ny antoka takina amin’ireo orinasa mandray an-tanana ny fanamboarana mba ho fotodrafitrasa haharitra no hamboarina.
“Io asa io dia asa maharitra. Tsy hoe mandalo indray mandeha ny orana dia simba fa asiana antoka herintaona ny fanamboarana ary izay no hifanarahana amin’ny orinasa izay handray ny asa”, hoy hatrany ny fanazavany. Ankoatra ireo dia hiady amin’ny famongorana ny kolikoly izay nambotry firenena hatramin’izay ny Governoran’ny Faritra Analamanga. Notsindriany fa tsy hisy intsony ny asa izay tsy natao akory nefa hamoaham-bola. Fanamby lehibe no apetraky ny Governoran’ny Faritra Analamanga. Tsy ho mena-mitaha amin’ny Governoran’ny Faritra hafa ny tenany, araka ny nambarany, fa sahy hifaninana tsara amin’ny fampandrosoana ny Faritra izay niadidiany.
Takiany amin’ny fahefana mpanatanteraka kosa anefa ny hanafainganana ny tolo-bidy ho an’ireo orinasa satria maika ny fampandrosoana, araka ny voalazany hatrany.